Nhau - ABB inotsigira kumhanyisa kukurumbira kwemagetsi-anoshanda ma motors uye maanverter kuti akunde kushanduka kwemamiriro ekunze
Nhasi, ABB Boka rakaburitsa chena bepa kekutanga, richitsanangura simba rakaponesa simba iro magetsi matsva-anoshanda uye inverter matekinoroji anounza kumaindasitiri nezvivakwa, uye vachidana kuhurumende nemaindasitiri kubva pasirese kuti vashande pamwechete kukurumidza kusimudzira tekinoroji uye nekuwedzera zvinobudirira kugadzirisa shanduko yemamiriro ekunze.
Chirevo cheInternational Energy Agency (IEA) chinoratidza kuti maindasitiri emagetsi anoverengera 37% yesimba rekushandisa pasirese, uye zvivakwa nezvivakwa zvinoshandisa 30% yesimba repasirese.
Kunyangwe mota uye inverters zvisingawanzo kuoneka mune veruzhinji, ivo vari kwese kwese. Kubva pamapombi emaindasitiri, mafeni uye mabhandi ekufambisa muindasitiri yekugadzira, uye mafambisirwo ekufambisa, kumakomputa emagetsi nemidziyo yeHVAC muzvivakwa, mota uye inverters inhamba yakakura yezvishandiso zvakakosha muhupenyu hwedu hwazvino. Chiitiko chinopa sosi yesimba.
Mumakore gumi apfuura kana zvakadaro, mota uye inverter tekinoroji yakafambira mberi nekukasira uye bound, uye kunoshamisa kwesimba kugona kwave kuwanikwa kuburikidza neanhasi matsva dhizaini. Nekudaro, kuchine huwandu hwakawanda hwema mota ekutyaira masisitimu ari kushanda (angangoita mamirioni mazana matatu epasi rese) anotambura nekushomeka kwekushandisa kana kuwandisa kwesimba kwesimba, zvichikonzera kurasa simba kwakanyanya
Maererano nekufungidzira nemasangano akazvimirira ekutsvagisa, kana masisitimu ekare akatsiviwa nemidziyo inogonesa simba, 10% yemagetsi anoshandiswa pasi rose anogona kuchengetedzwa, uye kudzikiswa kunoenderana kwekuburitswa kwemweya wegreenhouse kuchasangana nematambudziko emamiriro ekunze e2040 echibvumirano cheParis. Kupfuura makumi mana muzana emari yacho.
"Zvichienzaniswa nemamwe matambudziko, kuvandudzwa kwesimba remagetsi mumaindasitiri ibudiriro huru mukugadzirisa shanduko yemamiriro ekunze, uye inogona kunzi mhinduro yemamiriro ekunze isingaoneki." ABB Group Motion Control Division Mutungamiri wepasi rose Morten Wierod akati, "Kubudirira kwakasimba iABB Chikamu chakakosha chezvinangwa zvedu zvekushanda zvakare chikamu chakakosha chekosha yakakosha yatinogadzira kune vese vanobatika. Parizvino, ABB yanga ichivimba netekinoroji yepamusoro kuti iite zvese zvainogona kubatsira mukuchengetedza simba uye kudzikisira hutachiona mumaindasitiri, kuvaka uye kutakurwa zvikamu- -Kushandiswa kwesimba munzvimbo idzi kunotora chikamu chinosvika zvikamu zvitatu kubva muzana zvekushandisa kwesimba kwepasi rese. ".
Ichokwadi kuti kuisirwa pamwero wakakura senge mota dzemagetsi uye simba rinowedzerwazve chiyero chinoshanda. ABB Boka rinotenda kuti isu tinodawo kubatanidza kukosha kwakaringana kumatekinoroji eindasitiri anogona kuunza mabhenefiti akakura kune zvakatipoteredza noupfumi.
"Isu takagara tichisimbisa kuti huwandu hukuru hwemashandisirwo emagetsi anoshandisa magetsi uye inverters mumaindasitiri uye zvivakwa zvinoita basa rakakosha mukusimudzira kusimukira kwenzanga," Ma Teng akawedzera, "45% yemagetsi epasi rose anoshandiswa kutyaira zvivakwa. Kumamotor mukuvaka nekushandisa mumaindasitiri, kuwedzera mari mukukwidziridza mota kuchaunza kudzoka kukuru maererano nemagetsi. ”